Haddii qotomiyey si sax ah oo ku saabsan network gurigaaga, consoles'ka ciyaarta video sida Playstation 3 noqon kartaa la yaab leh oo waxtar leh oo si dhab ah u anfacaya videos ka PC qaadan in aad HDTV, oo aan in ay u guuraan PC culus inay sidaa sameeyaan. Inkasta oo ilaa set hore waxay noqon kartaa howl culus aya hortaala, mar walba waa diyaar, waxa ay noqon doontaa fududahay in qulquli content ee guud ahaan. Maqaalkani waxa uu kugu hagi doona nidaamka oo dhan hoorto video ka PC in PlayStation3. Waxa kale oo aanu ku siin dhamaystiran Hanuuniye inuu kaa caawiyo inaad raaxaysatid video on your TV, hubi tan >>
Qeybta 1: Stream Playstation 3 taageerayaan Video qaabab
Qeybta 2: Qaabka il kasta oo Video ka PC in PlayStation3
Waa wax fudud in la sii qulquli taageeray qaabab video by Playstation 3. Ma aha in u leeyihiin in ay soo bixi software kasta oo dheeraad ah si aad u samayseen, sidii Windows Media Player samayn kartaa computer noqon in la qaybsiga warbaahinta server. Halkan sida:
Talaabada 1: Hubi Settings PS3
Ka hor maraya tallaabooyinka hoose, waa inaad marka hore awood Media Connection Server aad PS3. Si tan loo sameeyo:
1. Tag Home Screen> Settings> Settings Network.
Waxaa 2. Dooro Media Server Connection iyo Yeelo uu qarka u saaran inay karti.
Talaabada 2: Calan Windows Media Player
Markaas your computer qarka u saaran inay la wadaagaan files. Tani waxay ka dhigi doonaa PS3 xirmaan your computer. Si aad u hesho wax socda, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. In Windows 8: Open Start screen iyo nooca "Network iyo Sharing". Guji "Settings" dhanka midig ka dibna riix "Network iyo Sharing Center".
In Windows 7: Riix badhanka bilow iyo ka dibna tag "Control Panel"> "Network iyo Sharing Center".
2. Click "Change Advanced Sharing Settings". Marka hore hubi in "Network Discovery" waxaa gagadin. Markaasay aad u hubiso "File iyo printer" qaybsiga waa.
3. Markaas hoos ugu rogto oo shid Streaming Media sooci doonaan ka dibna riix "Dooro Media Streaming Options". Markaas riix "Daar Media Streaming" iyo in la sameeyo.
Talaabada 3: Start Streaming
Markii wax walba waa diyaar, shid aad PS3, oo taga si aad qaybta Video ah. Your PC waa in la jiraan ku qoran sida il warbaahinta ah. Just u dooran oo dhan warbaahinta la heli karo in la heli karo si ay u isticmaalaan doonaa.
Hadda waxaad ku raaxaysan karaan warbaahinta aad ku PS3. Si kastaba ha ahaatee, Windows Media Player noqon kartaa khilaafsan oo ma noqon doonto in aad awood u ciyaari PS3 qaabab aqlka. Si aad u leeyihiin waayo-aragnimo fiican, waxaad ka qaadan kartaa hab ee qaybta 2, kaas oo awood kuu ay si buuxda isla markiiba ku raaxaysatid video!
Sida PS3 kaliya taageeraan MP4, AVI, AVCHD iyo wmv video files, waxaa laga yaabaa in aad la yaabanahay sida ay u ciyaari PS3 aqlka qaabab video sida MKV, VOB, FLV iyo in ka badan. Halkan Wondershare Video Converter Ultimate si weyn lagu talinayaa. Waxaa ugu fiican PS3 video Converter on suuqa. Iyo nooca ugu dambeeya ayaa sidoo kale ka mid ahaa plugin awood loo yaqaan "Media Server", kaas oo kaa caawinaysaa in aad sii qulquli kasta video in PS3 effortlessly. Halkan aan aragno sida ay u shaqayso.
Talaabada 1: Open Server Media
Inta aynaan ku bilaabatay, waa in aad marka hore hubi in aad PC iyo PS3 ku yaalaan shabakad isku mid ah. Markaas laba jibaar riix "Media Server" toobiye icon on desktop. Barnaamijka waxaa si toos ah lagu ogaan doonaa qalabka kabka ka heli karaa shabakada. Markaas ka hoose ee suuqa kala hoose waxaad dooran kartaa PS3.
Talaabada 2: dejinta aad video files
Ka dib markii in, aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi faylasha aad rabto in aad sii qulquli barnaamijka. Haddii kale, waxaad u isticmaali kartaa oo ay helaan dhammaan faylasha warbaahinta ku kaydsan aad PC adigoo riixaya "Computer" icon.
Falaarta ku file warbaahinta ah oo aad arki doonaa "Play on TV" icon. Riix icon iyo daaqad xira curiyo doonaa. Markaas waxaad awoodi doontaa inaad si ay u sii qulquli video aad PS3 aan ka kaaftoomi.
Hadda kaliya aad PC gagadin, oo ku nastaan ​​ka hor aad TV la salool iyo cabitaannada!
> Resource > Windows > Sida loo sii qulquli Video ka PC in PlayStation3